Idlisa ngesimanje i-Civic | IOL Isolezwe
Idlisa ngesimanje i-Civic
Isolezwe / 19 July 2012, 1:33pm /
AMAJIKA aseFranchoek nemigwaqo emazombezombe yase Stellenbosch ekakwe yizivande zewayini indawo ekahle yokwethula imoto esezingeni le Honda Civic 5-Door.
Lokhu ngikusho ngoba lomtshumo wemoto uzwakala kahle uma uzowukhulula emigwaqeni ongeke uzithola usumiswa kuyo ngamaphoyisa noma usuzithela phezu kwezingane zesikole ziwela umgwaqo. Akujwayelekile ukuthi imoto ephethe isitayela nobuhle njengale Civic 5 door iphinde ikwazi ukuthi kube yimoto yejubane. Njengoba beyenze yaba ngumtshumo nje kwenza ukuthi ihambe kalula ngisho zimweni lapho kusuke kunomoya khona onamandla, kanti ngaphandle kwalokho ukwakhiwa kwayo kwenziwe ngendlela yokuthio yonge kakhulu ku petrol kanti nesisindo sayo basehlisile.
Le Civic entsha yakhelwe ophezu kwesisekelo salena endala ngokusho koMqondisi wakwa-Honda emazweni aseNingizimu ye-Afrika uYoshiaki Nakamura. Noma ngivumelana kancane noNakamura kodwa mina ngiyibone le-Civic iyinhle kakhulu kuneyakuqala ikakhulukazi ngaphakathi. Okunye engikuqaphelile ukuthi ngaphambili ohlangothini lomshayeli bayixine kakhulu ngezinto eziningi namabhathini engibona sekuyihaba emotweni.
Ngaphambili ihlukene izigaba ezimbili kukhona abakubiza nge Driver Interface Zone lapho ukhonjiswa khona yonke imininingwane emayelana nemoto kodwa lokho kuqondene ngqo nomshayeli, bese kuba khona abakubiza nge Adjacent Information Interface zone lapho kuxhunywe khona iradio, i-intelligent Multi-Information Display (i-MID), kanye ne screen esikwazi ukukhombisa imoto, iBluetooth nokunye okuhambisana nobuchwepheshe besimanje. Ihlukene ngezinhlobo ezimbili zezinjini kukhona engu 1.8 iVTEC kanye nenkulu engu 2.2i DTEC. kumele ngikusho nje ukuthi le moto yakhelwe igenge esakhula esakhonze ijubane nobukhazikhazi njengoba ngike ngakuveza ukuthi uma ungaphakathi kuyo sekuqala ukuhwalala ungafunga ukuthi ukulama dolobhana amancane akhele iLas Vegas.
Le njini engu 1.8 litre ikhiqiza amandla afinyelela ku 104 kW kanye ne torque engu 174Nm. kule njini ungazikhethela phakathi kwedonsa ngamagiya ayisithupha eshintshwayo noma ezishintshayo edonsa ngamagiya amahlanu.
Enye injini ingu 2.2 litre turbodiesel okusho ukuthi isebenzisa udizili. Le njini ikhiqiza amandla afinyelela ku 110kW kanye ne torque engu 350Nm. Le Civic iwushiyile umhlaba ngo 20 mm yase idla ngokuba yinde ngo 10 mm uma uyiqhathanisa nendala.
Isikhala sebhuthi ngemuva singu 401 litres. emazweni ase Europe ikleliswe phakathi kwezinye izimoto eziphephile ngenxa yokuthi ine Advanced Compatibility Engineering (ACE) evikela ukulimala kwemoto nabagibeli uma kwenzeka igingqika, kanti iphinde ibe neVehicle Stability Assist, ABS, EBD. Le Civic ethe thuthu ngezinga okuyi DTEC inezinto ephuma nazo ezengeziwe njenge panoramic glass sunroof (engicabanga ukuthi abantu sebeyazi ukuthi ukhakhayi olukhanyayo okwazi ukubona isibhakabhaka kulo) iradio ehambisana ne amplifier ne subwoofer, iBluetooth hands-free cellphone connectivity ikhamera yangemuva ( kanye nama sensa asiza uma upaka imoto.
1.8 i-VTEC Elegance Manual R248 000
1.8 i-VTEC Elegance Automatic R261 000
1.8 i-VTEC Executive Manual R270 000
1.8 i-VTEC Executive Automatic R283 000
2.2 i-DTEC Exclusive Manual R343 800
Amanani ahambisana ne servise plan yeminyaka emihlanu emuva kuka 90 000km kanye ne warranty yeminyaka emithathu emuva kuka 90 000km. IService yale moto kumele yenziwe njalo emuva kuka 15 000km.